Marihana hatrany fa ireo fitaovana fandanjana natokana ho an’ny varotra irery ihany no afaka ampiasana eny an-tsena. Noho izany dia tsy tokony ampiasa fitaovana ankoatra izany toy ny fandanjana zaza na fandanjana olona na koa fandanjana fampiasa ho an’ny lakozia.
Ny fitaovana fandanjana ampiasana ho an’ny varotra rehetra dia tsy maintsy mandalo fitsarana avokoa. Ao aorian’ny fitsarana dia mahazo ny “vignette” manamarina ny fitaovana ka ilaina havaozina isan-taona.
Ny sampan-draharaha Métrologie Légale (SML) eto amin’ny MICA no hany manana fahefana manamarina sy manolotra fanomezam-panamarinana ireo fitaovam-pandrefesana rehetra fampiasa amin’ny varotra toy ny fandanjana, ny lanja.
Ny asa iandraiketan’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana (MICA):
miaro ny zon’ny mpanjifa amin’ny halatra eo amin’ny hanetsahana
mitandro ny hisian’ny fifaninanana madio eo amin’ny mpandraharaha ara-toekarena
miantoka ny fahamarinan’ny refy atao eto Madagasikara
Manentana hatrany ireo mpivarotra mampiasa fitaovam-pandanjana araka izany hitondra ireo fitaovana ampiasany ho tsaraina sy hanaraka ny ara-dalàna hatrany ho an’ny tombontsoan’ny tsirairay.
📣 Vaovaon’ny faritra : Boeny